Home News Somaliland oo beenisay in uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeya Dowladda Itoobiya
Somaliland ayaa meesha ka saartay warar muddooyinkii dambe si wayn loo hadal haayay, kaasi oo ku aadan inuu xumaaday xiriirka wada shaqeynta ah ee ka dhaxeeya Itoobiya & Somaliland.
Yaasiin Xaaji Maxamuud (Faratoon) Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland oo la hadlay Idaacada VOA, ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya inuu xumaaday xiriirka Somaliland iyo Itoobiya, islamarkaana xiriirka uu yahay mid hagaagsan.
Waxa uu sheegay inay jireen muddooyinkii dambe dacaayado laga faafiyay xiriirka labada dhinac, isaga oo sheegay Safiirkii Itoobiya u fadhiyay Somaliland ee la bedelay inuu ka mid ahaa Safiiro dowladda Itoobiya ay ka bedeshay 60 dal.
“Xiriirka Itoobiya & anaga naga dhaxeeya waa mid ku dhisan danaha la iska leeyahay, dal waliba dantiisa sida uu ku gaadhi lahaa wuu garanayaa, xiriirka wuu wanaagsan yahay dacaayado laga sameeyay ayaa jiray arrintaasi waana been, Safiirkii u joogay Somaliland oo la bedelay ayaa jirtay wuxuun ka mid ahaa lixdan safiir oo dalal badan Itoobiya ay ka soo bedeshay, taasi ayaana keentay dad badan inay u fasirtaan xiriirka inuu xumaaday.” Ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland.
Dalka Itoobiya ayaa waxaa ka dhacay isbedel ballaaran, tan iyo markii Xafiiska Shaqada uu si toos ah ulawareegay Ra’iisul Wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed.
Isbedelo dar dar ku socda, ayaa ka socda dalalka Geeska Afrika, gaar ahaan dalalka aadka ugu dhaw Somaliya oo Itoobiya ay ka mid tahay.
Previous articlemuxuu salka ku hayaa khilaafka Xaaf iyo Sheekh Shaakir
Next articleMusharaxiinta G/galbeed oo walaac xoogan ka muujiyay Doorashada Maamulkaasi!
Fadeexada Kheyre ee doorashada Madaxtinimo ee Koonfur Galbeed oo si cad...